Hindiya Waxay Abuurtaa Duulimaad Drone ah oo Wax ku ool ah si ay u suurta gasho Wanaagsan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Hindiya Waxay Abuurtaa Duulimaad Drone ah oo Wax ku ool ah si ay u suurta gasho Wanaagsan
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Hindiya • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Warshadaha diyaaradaha ee Hindiya
Mudane Jyotiraditya Scindia, Wasiirka Duulista Hawada ee Hindiya, ayaa maanta sheegay in doorkii dowladda uu is-beddelay intii uu hoggaaminayey Ra'iisul Wasaare Narendra Modi, ayna u shaqeyneyso sidii awood-bixiye, oo aysan ahayn sharci-dejiye, isagoo eegaya hab cusub oo caddeyn ku saleysan siyaasadaynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Teknolojiyadda Drone -ka ayaa u keeni doonta kuwa ku nool cidhifyada xarunta horumarka.
Waxaa jira qorshayaal la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si loo sawiro kumanaan tuulo taas oo siineysa warshadaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Hindiya kor u kac weyn.
Isticmaalka maanta, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa wax ku ool u noqon doona bixinta tallaalada, taasoo keentay kororka waditaanka tallaalka.
Isagoo ka hadlaya kalfadhiga "Drones for Good Good - Barnaamijka Wacyigelinta Dadweynaha," oo ay si wadajir ah u soo qabanqaabiyeen Xiriirka Rugaha Ganacsiga iyo Warshadaha Hindiya (FICCI) iyo hay'adaha maaliyadda horumarinta (DFI) oo kaashanaya Madasha Dhaqaalaha Adduunka, Mr. Scindia wuxuu yiri farsamada kor u qaadistu waa muhiim iyo Tiknolojiyadda loo yaqaan 'drone technology' wuxuu keeni doonaa kuwa ku nool cidhifyada xarunta horumarka. “Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxay door muhiim ah ka ciyaaraan isku xirka dadka dhererka iyo baaxadda dalka,” ayuu yiri.
Hindiya waddan ahaan, ayuu yidhi Mr. Scindia, guud ahaan wuxuu ahaa qof raaca horumarka hal -abuurka ama farsamada. Waa markii ugu horeysay ee aan eegno inaan noqono hogaamiye, ayuu yiri Wasiirka Duulista Hawada.
Xeerarka cusub ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, oo ay weheliso wakhti aad u gaaban oo leh qorshaha dhiirrigelinta ee ku xidhan wax-soo-saarka (PLI) ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, ayaa siinaya warshadaha curdinka ah ee wax-soo-saarka gudaha kor u kac weyn. “Boqolkiiba 40 qiimaynta isku -darka qiimaha ee waaxdu waxay siinaysaa faa iido gaar ah si aad ugu bilowdo duulimaad,” ayuu yidhi Mr. Scindia.
Waxa kale oo uu xusay in tiknoolajiyad kasta si ay u guulaysato ay u baahan tahay 3 tallaabo - qaab -dhismeedka siyaasadda, dhiirrigelinta maalgelinta, iyo qaab -dhismeedka dalabka. Dowladda Hindiya, ayuu sii raaciyay, iyada oo la raacayo Sahanka Tuulooyinka iyo Khariidaynta Teknolojiyadda Horumarinta ee Aagga Tuulooyinka (SVAMITVA) ayaa qorshaynaysa inay adeegsato diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u tusto kumanaan tuulo oo sii warshadaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Hindiya kor u kac weyn.
Hindiya waxay leedahay dhulal aad u adag in la gaaro, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxay wax ku ool u noqon doonaan bixinta tallaalada, taasoo dhalisay kororka wadista tallaalka, ayuu raaciyay wasiirka. "Dawladdu waxay durba u shaqeyneysaa sidii macmiil barroosinka ah iyadoo adeegsanaysa tallaallada iyo khariidaynta iyo abuurista qaab -dhismeedka baahida loo qabo tikniyoolajiyadda drone -ka ee Hindiya," ayuu yiri Mr. Scindia. Dawladdu waxay oggolaatay Qorshaha PLI ee warshadaha diyaaradaha aan duuliyuhu keenin maalgashiyo cusub iyo kobcinta shaqaalaynta Hindiya, ayuu yidhi wasiirku. Wuxuu sheegay in teknolojiyadda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku socoto baxsadka wuxuuna ku boorriyay hay'adaha warshadaha inay ka caawiyaan tikniyoolajiyadda inay kacdo.
Mudane Rajan Luthra, Guddoomiyaha Guddiga FICCI ee Drones -ka iyo Xafiiska Guddoomiyaha - Madaxa Mashaariicda Gaarka ah, Warshadaha Reliance, Ltd., ayaa sheegay in beeruhu ay tahay mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan Hindiya oo leh awood weyn oo suuq iyo adeegsiga diyaaradaha drones -ka ee beeraha wuxuu gaarsiin doonaa faa'iidooyin waaweyn beeraleyda iyo dadka caadiga ah.
Mudane Vignesh Santhanam, Aerospace iyo Drones, Forum Dhaqaalaha Adduunka, ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay tahay inay xoojiyaan nidaamka cilmi baarista agri si ay u taageeraan waaxda iyada oo la kordhiyo wax soo saarka iyo kor u qaadista dadka reer miyiga ah si ay u helaan hab -nololeed sugan halka ay u noqon lahaayeen laydh farsamada afaraad ee IR.
Mr. Smit Shah, Agaasimaha Iskaashiga, DFI, ayaa yiri, "Waxaan soo dhaweynaynaa dadaallada Wasiirka oo ah shuraakada warshadan."